Xildhibaan Khadiija Diiriye: Baarlamaanku waa maroodi aan xooggiisa u jeedin – Kalfadhi
Xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa, intii uu socday kulanka xildhibaannada Golaha Shacabka ee maanta, waxay golaha ku tilmaantay maroodi aan u jeedin xooggiisa. Waxay dhaliishay aragtida eedeysa Xildhibaannada Wasiirada ah. “Maahan in aad dhahdaan Xildhibaanadii Wasiirada ahaa ayaa maqan, markaan imaanana aad dhahdaan wasiir ayaa tahay, mana hadli kartid” ayey tiri Xildhibaan Kahdiija, oo sidoo kale ah Wasiirka Dhalinyarada iyo Cayaaraha Soomaaliya.
Khadiijo waxay sheegtay iney dowladda dalku tahay mid ku dhisan baarlamaan, oo ay awoodda ugu badan leeyihiin xildhibaannada. Hase ahaatee, waxay sheegtay in aysan xildhibaannadu u jeedin awooddaas. Waxay golaha la wadaagtay in xukuumadda ay ka tirsan ay tahay mid u diyaarsan inuu baarlamaanku markasta la xisaabtamo, ilaalinta amnigana loo wada siman yahay, sida ay hadalka u dhigtay.
Inta badan Xildhibaannada Wasiirada ah, marka uu socdo kulanka Golaha, gaar ahaan marka ay xildhibaannadu si adag ula xisaabtamayaan xukuumadda, waxay dowladda ku dhex difaacaan golaha, iyagoon u kala harin. Taas ayaa loo arkaa in ay keento eedda ay Xildhibaan Khadiija iska difaaceyso ee ah in Xildhibaannada Wasiirada ah lagu tiriyo kuwo gar iyo gar-darro taageera Golaha Wasiirada.